सुनसरीको रामधुनी आएर झाक्रीले भनिन् : युवाहरुले नेताको होइन, विचारको पछि कुद्ने हो - हाम्रो शब्द
रामधुनी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कि केन्द्रीय सदश्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदश्य रामकुमारी झाक्रीले युवाहरुले नेतालाई नभई, विचार र सिद्धान्तलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
सोमबार इन्स्टिच्युट अफ क्रिटिकल डाइलग (स्कुल अफ माक्सिजम) सुनसरीले रामधुनीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै झाक्रीले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डले गरेका झगडासँग हामीलाई के सरोकार ? के उनीहरुको त्यो बैचारिक लडाइँ हो र ? युवाहरुले नेताको होइन, विचारको पछि कुद्ने हो ।’ उनले भनिन्, ‘पाको उमेरका नेताले बिचारको लाडाइँ छाडे । उनीहरुका आ–आफ्ना भाग मिलाउँलाई पार्टी फुट्न लागेको भ्रम फैलाउँदै हिँड्छन् ।’
पार्टी फुट्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाई छ । सुरुसुरुमा ओली–प्रचण्डका झगडामा आफुहरुलेसमेत अनाबश्यक समय खर्च गरेको सस्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘पहिला खुब उनीहरुका झगडामा लागियो । पार्टी फुट्छ भनेर खुब हल्ला फैलाए । बेकार कुरा, नेताहरुको अनाबश्यक झगडामा हामी किन सामेल हुने ? आखिर त्यो बैचारिक लडाइँ पनि होइन ।’
यो राम्रो, त्यो नराम्रो भन्दा पनि केपी, प्रचण्ड र माधव नेपाल सबैको आ–आफ्नै कमजोरी रहेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा अनेरास्ववियूका केन्द्रिय सदस्य एकराज दाहाल, पिनका केन्द्रिय सदस्य रोशन भट्टराई, अनेरास्ववियू पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवम् रामधुनी वडा नं ५ का वडाअध्यक्ष डेगराज फुयाल, अनेरास्ववियू पूर्व केन्द्रिय सचिवालय सदस्य अशेष घिमिरे लगायतले कार्यक्रम सफलताको शुभकामना दिएका थिए ।
सम्पुर्ण जिल्ला, पालिका, क्याम्पस र विद्यायालयसम्म स्कुल अफ माक्सिजम बिस्तार गरेर अध्यनको दायरालाई फराकिलो बनाउदै लानुपर्ने विद्यार्थी नेताहरुको भनाई थियो ।